अनूदित निबन्ध : आशाको खुशी - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कथा : निर्वाण
हास्य कथा : बाङ्गे →
अनूदित निबन्ध : आशाको खुशी
कती पटक पढियो : 105
~सर सैय्यद अहमद~
अनु : जाकिर हुसैन
ए आकाशमा खैरा बादलहरूमाझ चट्याङ परेझैं चम्कने इन्द्रेणी ! ए आकाशका तारागण र तिनका मनमोहक चमक ! ए उच्च पहाडहरूका आकाशसँग कुरा गर्ने कुहिरोले ढाकिएका टाकुराहरू ! ए पहाडका वैभशाली बाटिका ! ए गगनचुम्बी शिखरहरूको चित्ताकर्षक बोट–बिरुवा ! तिमीहरू हाम्रो वरिपरिका रुख बिरुवा, हरियो खेती र सलल बग्ने नदी–नालाहरूभन्दा बढी हर्षित किन देखिन्छौ, किन ? तिमीहरू हामीबाट धेरै टाढा छौ भनेर त हो नि ? हो, यसै दुरीले नै तिमीहरूलाई सुन्दरता प्रदान गरेको हो । यसै दुरीले गर्दा नै तिम्रो निलो रङ्गलाई हाम्रो आँखाले मन पराएको हो ।
हाम्रो जिन्दगीमा पनि जुन चिज धेरै टाढा छ त्यसैले हामीलाई खुशी तुल्याउँछ । त्यो चिज के हो ? के बुद्धि हो जसलाई सबैले सबैभन्दा उत्कृष्ट गन्छन् ? के यसले हामीलाई आइन्दाको खुशीको विश्वास दिलाउन सक्छ ? अहँ, कदापि सक्दैन । यसको मैदान त अत्यन्तै साँघुरो छ । धेरैमा धेरै प्रकृतिसम्म यसको पहुँँच हुन सक्छ । यो कुरा सबैको सामुन्ने छर्लङ्ग छ ।
ए उज्जवल मुहार भएकी विश्वासकी सुन्दर एकलपुत्री आशा ! यो ईश्वरीय प्रकाश तिमीसँगै छ । तिमीले नै हाम्रो कठिनाइका घडीहरूमा हामीलाई सान्त्वना दिन्छौ । तिमी नै संकटकालमा हाम्रो मद्दत गर्छौ । तिम्रै कारणले धेरै टाढा निर्जन ठाममा रहेका खुशीहरू अत्यन्तै समीप लाग्छ । तिम्रै सहाराले हामी जिन्दगीका कठिनभन्दा कठिन उपत्यका पार गर्छाै । तिम्रै कारणले चीर निन्द्रामा रहेका विचारहरू ब्युँझन्छन् । तिम्रै कृपाले खुशी, खुशीका लागि प्रसिद्धि, प्रसिद्धिका लागि बहादुरी, बहादुरीका लागि दानशिलता, दानशिलताका लागि स्नेह र स्नेहका लागि सद्कर्म तयार छन् । मनुष्यका सारा खुशी तथा सुकर्महरू तिम्रै अधिनमा छन् र तिम्रै आज्ञाकारी छन् । प्रथमपटक पापमा फस्ने त्यो मनुष्य जब शैतान (दुष्टात्मा) को चक्रब्युहमा फस्यो र सम्पूर्ण सद्कर्महरूले उसलाई छोडेर कुर्कमहरूले घे¥यो त्यति बेला तिमीले मात्र उसलाई साथ दियौ । तिमीले नै त्यस निराशालाई निराशा बन्न दिएनौ । तिमीले नै त्यस मृत्युमा जकडिइसकेको हृदयलाई मर्न दिएनौ । तिमीले नै उसलाई त्यस अपमानित अवस्थाबाट निकालेर फेरि उच्च स्थानमा पु¥यायौ जहाँ फरिश्ता (देवदूत) हरूले पनि उसलाई ढोगे । (यहाँ बाइबल र कुरआनमा उल्लेखित प्रथम मानव आदमको इतिहासलाई इंगित गरिएकोछ ।)
सयौं वर्षसम्म आफ्नै जातिका मान्छेहरूबाट पीडित त्यस सत्यवादी ईशदूतलाई पनि तिम्रै सुन्दर मुहारले साहस दिएकोथियो ।
त्यो प्रथम माझी जब सामुद्रिक आँधीले बगिरहेको थियो; निराशाको अतिरिक्त उसले केही देखिरहेको थिएन; त्यति बेला तिमी नै त्यस संकटमा उसको डुंगा खियायौ । उसको समस्या समाधान ग¥यौ । तिम्रै कृपाले जुदी पहाडको पवित्र शिखरलाई सम्मान प्राप्त भयो । जैतूनको हरियो डाँठ वफादार परेवाको चुच्चोमा भेंटको सन्देशझैं पुग्यो । जेजति श्रीवृद्धि र कृपादृष्टि भएको छ, तिम्रै कारणले भएको छ ।
ए आकाशको ज्योति ! ए निराश मनहरूको खुशी– आशा ! तिम्रै ताजा एवम् हरिया बगैंचाबाट सवैलाई प्रेमको फल प्राप्त हुन्छ । तिमीमा नै हरेक कष्टको ओखति छ । तिम्रै कारणले प्रत्येक दुःखमा आराम छ । बुद्धिको बीच जंगलमा भौंतारिंदै थकित बटुवा फेरि फेरि तिम्रै घना बगैंचाको हरिया वृक्ष–बाटिकाको छहारी खोज्छ । यहाँको शितल पवन, सुरिला आवाजयुक्त पशु पंक्षीहरूको राग, बग्ने नदी–नालाहरूका छाल–तरंगले उसको हृदयलाई राहत दिन्छन् । उसको मृत विचारहरूलाई फेरिबाट जीवित तुल्याइदिन्छन् । उसका तमाम चिन्ता दूर हुन्छन् र यूगौं यूगका खुशीहरू फर्केर आउँछन् ।
हेर, निर्दाेष विवश शिशु कोक्रोमा सुतेको छ । उसको दुःखी आमा आफ्नो दिनचर्यामा लागेकिछिन् र त्यस कोक्रोको डोरी पनि हल्लाइरहेकिछिन् । हात काममा तर मन भने बच्चामा । मुखले बच्चालाई लोरी दिन्छिन्—
“सुत मेरो नानी सुत !
ए आफ्नो पिताको मूर्ति, मेरो दिलको शितल सुत !
ए मेरो दिलको कोपिला ! सुत ।
बढ, फल, फक्र, पूmल ।
तिमीमा कहिल्यै पतझड नआओस् ।
तिम्रो हांगामा कहिल्यै कुनै काँडा ननिक्लोस् ।
तिमीलाई कुनै कठिन घडि नआओस् ।
तिम्रो आमाबाबाले भोगेका कुनै कठिनाई तिम्ले भोग्नु नपरोस् ।
सुत, मेरो नानी सुत !
मेरो आँखाको ज्योति, मेरो दिलको सुख, मेरा बाबै सुत !
तिम्रो मुहार चन्द्रभन्दा पनि उज्जवल हुनेछ ।
तिम्रो स्वभाव तिम्रो पिताभन्दा पनि राम्रो हुनेछ ।
तिम्रो प्रसिद्धि, तिम्रो क्षमता, तिम्रो प्रेम जुन तिमीले मलाई गर्नेछौ
अन्ततः मेरो मनलाई खुशी दिनेछ, सान्त्वना दिनेछ ।
तिम्रो हाँसो हाम्रो अँध्यारो घरको प्रकाश हुनेछ ।
तिम्रा मीठा मीठा कुराले हाम्रो दुःखलाई दूर गर्नेछ ।
तिम्रा आवाज हाम्रालागि हर्षित तुल्याउने राग हुनेछ ।
सुत मेरो बच्चा सुत !
ए हाम्रो आशाको बिरुवा सुत !
भन, जब हामी यस संसारबाट बिदा हुनेछौं तब तिमीले के गर्नेछौ ?
तिमी हाम्रो निस्प्राण शरीरनिर खडा हुनेछौ ।
तिमीले सोध्नेछौ तर हामी भने केही बोल्ने छैनौ ।
तिमी रुनेछौ तर हामीले कुनै दया गर्ने छैनौ ।
ए मेरो प्यारो रुने नानी !
तिमी हाम्रो लाशनिर आएर हाम्रो आत्मालाई खुशी पार्नेछौ ।
आह ! हामी हुने छैनौ तर हाम्रो यादमा तिमीले आँसु बहाउनेछौ ।
आफ्नो आमाको मायालु मुहार, आफ्नो बाबाको उज्जवल अनुहार याद गर्नेछौ ।
आह, हामीलाई यहि कुराको दुःख छ ।
त्यति बेला हाम्रो स्नेह–प्रेमलाई याद गरी तिमी दुःखी हुनेछौ ।
सुत मेरो नानी सुत ।
सुत मेरो बाबै सुत ।”
यो आशाको खुशी आमालाई त्यस बखत थियो जब बच्चाको मुखमा बोली थिएन । तर, जब ऊ अझै ठूलो भयो र निर्दाेष हाँसोले आफ्नो आमाको दिललाई शितलता दिन थाल्यो; खुशी पार्न थाल्यो; आमा आमा भन्न सिक्यो र उसको प्यारो आवाज अधुरा शब्दहरूमा उनको कानमा गुञ्जन थाल्यो; आँसुले आफ्नो आमाको प्रेमको आगोलाई भड्काउन थाल्यो; विद्यालयसँग उसको सरोकार भयो; दिउँसो पढेको पाठ दुःखी भई राति आफ्नी आमालाई सुनाउन थाल्यो; अनि जब मिरमिरेको छानोमुनि उठेर हातमुख धोईओरी आफ्ना मातापिताका साथ जब बिहानको उपासनामा सामेल हुन थाल्यो र आफ्नो निष्पाप दिल तथा निश्छल वचनले देखाउटीपनको लागि होइन कि अन्तरआत्माले जब परम प्रभुको नाम लिन थाल्यो तब यो आशाको खुशी झन् बढेर आयो । उसका मातापिता त्यस निर्दाेष बच्चाको सच्चा सहानुभूति देखेर कति हर्षित हुन्छन् ? आह ! हाम्रो प्यारो आशा ! उम्मेद ! तिमी नै हौ जो कोक्रोदेखि चिहानसम्म हाम्रो साथ रहन्छौ ।
हेर, त्यो वृद्धलाई । अन्धो छ । आफ्नो घरमा बसेर रोइरहन्छ । उसको प्रिय–पुत्र भेडाको हुलबाट हरायो । उसले छोरोलाई खोज्छ तर भेट्दैन । उदास छ ऊ तर आशा मारेको छैन । दाँतले च्यातिएको रक्ताम्मे कुर्ता देख्छ तर अझै छोरो भेट्दैन भनेर निराश छैन । भोकले बेहाल छ । चिन्ताले दुब्लाएको छ । रुँदारुँदै आँखाहरू अन्धो भइसकेका छन् । कुनै खुशी उसको पक्षमा छैन तर एउटा उम्मेद छ जसले उसलाई भेटको आशामा जीवित र त्यस उत्साहमा खुशी राखेकोछ । (यहाँ बाइबल र कुरआनमा उल्लेखित ईशदूत याकूबको इतिहासलाई इंगित गरिएकोछ ।)
हेर त्यस निर्दाेष निष्पाप कैदीलाई ! अँध्यारो कुवाँको सात तहखानामा थुनिएको छ । सूर्यझैं चम्कने उसको मुहार मलिन भएको छ । ऊ आफूभित्र र मुलुकबाट बिछोडिएको विदेशी र अरू धर्म सम्प्रदायका मानिसहरूको चंगुलमा कैद छ । वृद्ध पिताको चिन्ताले उसको आत्मालाई पिरोलेको छ । प्रिय दाजुभाइहरूसँगको बिछोडले उसको आत्मा रोइरहेकोछ । कारागारको कठिनाई, त्यसको शुन्यता, त्यसको घुप्प अँध्यारोपन र त्यसमा आफ्ना निर्दाेशिताको सोचाइले उसलाई सदैव चिन्तित तुल्याइराख्छ । त्यस समय कोही उसको साथी छैन । तर ए अमर आशा ! तिमीमै उसको खुशी छ । (यहाँ ईश्वरीय ग्रन्थ बाइबल र कुरआनमा ईशदूत युसुफको वृत्तान्ततर्फ इंगित गरिएको छ ।)
त्यो बहादुर सिपाही रणभूमिमा तैनाथ छ । अभ्यास गर्दागर्दै थाकिसकेकोछ । हजारौं खतराको सम्भावना छ । तर सबैमा तिमीले गर्दा नै हौसला छाएकोछ । युद्ध भूमिमा जब बहादुरहरूका पंक्तिहरू मौन खडा हुन्छन् र रणभूमि सुनसान हुन्छ; मनमा अनौठो किसिमको भयमिश्रित साहस हुन्छ; युद्धको समय हुन्छ; युद्धको बिगुलको आवाज बहादुर सिपाहीको कानमा गुञ्जन्छ; ऊ आँखा उघारेर अत्यन्त साहसका साथ बिलकुल निडर भएर लडाइको मैदानलाई नियाल्दछ । जब बिजुलीझैं चम्किला तलवार र संगीनहरू उसको आँखासामुन्ने हुन्छन्, जब मेघ गर्जनझैं पड्कने पहाडजस्तै आगोको गोला बर्साउने तोपहरूको आवाज उसले सुन्छ र जब आफ्नो साथीलाई रगतमा लतपतिएको अवस्थामा जमीनमा उदांगो परेको उसले देख्छ तब ए बहादुरहरूको पाखुराका शक्ति ! ए बहादुर साहसकी आमा ! तिम्रै कारणले विजयको अभिलाषाले उसको मनलाई हौसला दिन्छ ।
त्यो समाजसेवी आफ्नो समुदाय र समाजको कल्याणको लागि चिन्तित रहन्छ । दिनरात आफ्नो मन जलाउँछ । हर समय भलाईका उपायहरू पहिल्याइरहन्छ । त्यसको खोजीमा दुर्गम स्थलहरूको भ्रमण गर्छ । परिचित र अपरिचतलाई भेट्छ । प्रत्येकसँगको कुराकानीमा आफ्नो कामको कुराको खोजी गर्छ । तर, जसको भलाई चाहन्छ उनैलाई सत्रुको रूपमा पाउँछ । उनीहरूले नै उसलाई पागल र जंगली भन्छन् । मित्रहरूले उसलाई पागल ठान्छन् । धर्मविद्हरूले अधर्मी घोषित गरिने धर्मादेशको डर देखाउँछन् ।
वह भला किसकी बात माने हैं
भाई सैय्यद तो कुछ दीवाने हैं
अर्थात्– उसले कसको कुरा पो मानेको छ र ? ऊ त अलिक सन्की पो छ……।
साथीहरूले साथ दिन्छन् तर हाँ हाँ गरी मेहनत र अन्तरात्माबाट टाढा रहेर सहानुभूति जताउँछन् । उसले कहीँ चैन पाउँदैन । उसले कसैलाई आफ्नो हितैषी पाउँदैन । उसको मन कसैमाथि टक्क अड्न सकेन तर ए तडपिरहेको दिलको राहत र ए टुक्रिएको दिलको सान्त्वना ! तिमी हरदम मेरो साथ छौ । तिमी नै हाम्रो अन्तरात्माको खुशी हौ । तिमी नै हाम्रो संकटकालको सारथी हौ । तिम्रो हौसलाद्वारा हामी आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्छौं । तिम्रै कारणले हामी लक्ष्य पूरा गर्नेछौं । प्रिय आशा ! तिमी सदा हाम्रो मनको खुशी बनी रहू ।
ए अमर आशा ! जब जिन्दगी अन्तिम दोसाँधमा रहन्छ; सांसारिक जीवनको सूर्य अस्ताउनै लागेको हुन्छ; हातगोडामा ताप हुँदैन; रंग फिका पर्दै हुन्छ; मुहारमा मृत्यु छाएको हुन्छ, हावा हावामा, पानी पानीमा, माटो माटोमा बिलीन हुन आँटेको हुन्छ त्यति बेला तिम्रै सहाराले त्यो कठिन घडी सुगम बन्दछ ।
त्यस बखत मलिन अनुहार, बिस्तारै बिस्तारै हल्लिरहेका ओठहरू अचेतावस्थामा बन्द हुँदैगरेका आँखाहरू र अचेत अवस्थाको समुद्रमा डुबेको आत्मालाई तिम्रै सम्झना हुन्छ; तिम्रै उज्जवल मुहार सामुन्ने हुन्छ; तिम्रै आवाज कानमा पर्छ अनि एउटा नयाँ आत्मा तथा ताजा खुशी प्राप्त हुन्छ र एउटा नयाँ एवम् अमर जिन्दगीको आशा हुन्छ जसमा अनन्तकालसम्मको खुशी प्राप्त हुनेछ ।
यो दुःख कष्टको समय हाम्रालागि तिम्रै कारणले बसन्त ऋतु साबित हुन्छ । यस अमर खुशीको उम्मेदले तमाम सांसारिक दुःख, चिन्ता तथा शारीरिक कष्टहरूलाई भुलाइदिन्छ र दुःखी साँझलाई खुशीको बिहानीमा बदलिदिन्छ जबकि मृत्युले मानिसको मनमा अत्यन्त भयानक भावना पैदा गरिरहेकोहुन्छ ।
र, हाम्रो आँखाबाट ओझेलको अर्काे संसार जसमा हामीलाई सदाको लागि रहनुपर्नेछ, जहाँ सूर्य र युगयुगान्तरको लहर पनि पुगेको छैन त्यहाँ तिम्रो मार्ग तीन चिजले पूरा हुनेछ– आस्थाको उपहार, उम्मेदको मार्गदर्शक र मृत्युको सवारीले । तर, ती सबै चिजहरूलाई सबभन्दा बढी शक्ति प्राप्त हुन्छ त्यस आस्थाको सुन्दर छोरीबाट जसको प्यारो नाम हो ‘आशा’ । (यहाँ स्वर्गको परिकल्पना गरिएकोछ ।)
अविश्वासी (अल्लाहमाथि आस्था नभएका) हरूलाई मृत्युको कठिन घडिमा कुनै आशा हुँदैन भन्ने केही मानिसहरूको धारणा छ । तर, म देख्छु तिम्रो राज्य त्यहाँ पनि छ । प्रलयमाथि विश्वास नगर्नेहरूले पनि तमाम जिन्दगीका दुःख–कष्टहरू अब यहीँ समाप्त हुँदैछन् भन्ने ठान्दछन् । उनीहरू अब कुनै दुःख कष्ट हुने छैन भन्ने आशा गर्दछन् । ऊ अब त्यस कष्टकर नहुने जमानाको उम्मेदमा अत्यन्त खुशी हुन्छ र दुःखको यूगको अन्त्य हुने खुशीमा प्राण त्याग गर्छ ।
(अलिगढ युनिभर्सिटीका संस्थापक सर सैय्यद अहमद त्यसताका प्रख्यात विचारक, लोकप्रिय समाज सुधारक र क्रान्तिकारी व्यक्तित्व थिए । उनका निकै लोकप्रिय उर्दू पुस्तक सर सैय्यदका केही आलेखहरुबाट यो लेख अनुवाद गरिएको हो ।)
This entry was posted in अनूदित निबन्ध and tagged Jakir Husain, Sir Syed Ahmad Khan. Bookmark the permalink.